Ny lalàna Granger sy ny Granger Movement
Ny lalàna Granger dia vondron'olon-dalàna natolotry ny mpanao lalàna avy amin'ny fanjakana Midwestern Amerikana avy any Minnesota, Iowa, Wisconsin, ary Illinois tamin'ny faran'ny 1860 sy ny fiandohan'ny taona 1870 taorian'ny ady Amerikanina. Nandrisika ny Granger Movement nokarakarain'ny vondrona tantsaha avy amin'ny National Grange amin'ny Didim-pitondrana ataon'ny mpiaramiombon'olon-tokana, ny Lalàna Granger dia natao hanatsarana haingana ny fitateram-bidy sy ny fitehirizana entam-barotra nataon'ireo orinasa mpamokatra lalamby sy ny orinasa mpamokatra vary.
Amin'ny maha-loharanom-pahavoazana goavam-be ho an'ny mpitondra monopole mahery, ny Lalàna Granger dia nitarika tamin'ny raharaha marobe amerikana manan-danja, izay nasongadin'i Munn v. Illinois sy Wabash v. Illinois . Ny lova navelan'ny Granger Movement dia mbola velona ankehitriny amin'ny endriky ny fikambanana National Grange.
Ny hetsika Granger, ny Lalàna Granger, ary ny Grange maoderina dia mijoro ho porofon'ny maha-zava-dehibe ny mpitarika Amerikana dia nanangana ara-tantara ny fambolena.
"Mino aho fa ny fitondram-panjakana dia hitoetra ho tsara toetra mandritra ny taonjato maro; raha mbola fambolena izy ireo. " - Thomas Jefferson
Nampiasa teny hoe "grange" ny mpanjanantany amerikana rehefa nanan-tany tany Angletera izy ireo, mba hanondroana toeram-pambolena sy trano fandraisam-bahiny. Avy amin'ny teny latinina ny teny hoe grànum . Any amin'ny Nosy Britanika, dia matetika ny mpamboly dia antsoina hoe "mpihetraketraka."
Ny Granger Movement: Teraka ny Grange
Ny hetsika Granger dia fiaraha-miasan'ny tantsaha amerikana, indrindra fa any amin'ny fanjakana Midwestern sy Southern, izay niasa mba hampitombo ny tombom-barotry ny fambolena nandritra ny taona nanaraka ny ady an-trano Amerikana .
Tsy niady tamin'ny tantsaha ny ady an-trano. Ireo vitsivitsy izay nahomby tamin'ny fividianana tany sy ny fitaovana dia nitaky trosa lalina mba hanaovana izany. Ny Railroads, izay lasa monopolo any amin'ny faritra, dia natokana ho an'ny daholobe sy tsy misy fepetra. Vokatr'izany dia afaka nanery ny tantsaha hivezivezy be loatra ny lalamby mba hitaterana ny vokatra eny an-tsena.
Ny fatiantoka ny fidiram-bolan'ny mponina amin'ny fambolena dia namela ny fambolena amerikana maro be tamin'ny fisavorovoroana.
Tamin'ny 1866, ny Filoha Andrew Johnson dia nandefa ny minisitry ny fambolena amerikana, Oliver Hudson Kelley, mba hanombanana ny toe-paharetan'ny fambolena any Atsimo. Gaga tamin'ny zavatra hitany i Kelley tamin'ny 1867 ka nanangana ny National Grange an'ny filaharan'ny tompon-trano; fikambanana iray izay nantenainy dia hampiray ny tantsaha tatsimo sy avaratra amin'ny ezaka amin'ny fiaraha-miasa mba hampandroso ny fanao amin'ny fambolena. Tamin'ny taona 1868, ny Grange voalohany, Grange No. 1, dia niorina tany Fredonia, New York.
Na dia natao ho an'ny tanjona ara-pampianarana sy ara-tsosialy aza ny voalohany, ny zandary ao an-toerana koa dia niasa ho sehatra ara-politika ka nanohitra ny fitomboan'ny vidin'ny fitaterana sy ny fitehirizana ny vokatra.
Ny harato dia nahomby tamin'ny fampihenana ny saran-dalany tamin'ny alalan'ny fananganana toeram-pikam-pambolena an-tanan-toeram-piompiana, ary koa ny ascenseur, solos, ary varahina. Na izany aza, ny saram-pitaterana entona mandatsa-bato dia mitaky ny lalàna mifehy ny fikambanan'ny mpivarotra lalamby; lalàna izay nanjary fantatra ho "lalàna Granger."
Ny lalàna Granger
Hatramin'ny Kongresy Amerikana dia tsy hanaiky ny lalàna amperinasa federaly hatramin'ny taona 1890, ny hetsika Granger dia tsy maintsy nijery ny lalampanorenan'ny fanjakana mba hanamaivana ny fanao amin'ny vidin'ny lalamby sy ny orinasa mpamokatra angovo.
Tamin'ny taona 1871, noho ny ezaka goavana nataon'ireo olom-boafidy teo an-toerana, ny fanjakana Illinois dia nametraka lalàna mandràra ny lalamby sy ny orinasa mpamokatra vary amin'ny fametrahana farafaharatsiny afaka mandidy ny tantsaha noho ny tolotra nataony. Ny fanjakana tany Minnesota, Wisconsin, ary Iowa dia nanao lalàna mitovy amin'izany.
Ny fahatahorana ny fahaverezan'ny tombony sy ny fahefana, ny lalamby sy ny orinasan-tseranana dia nanohitra ny lalàna Granger tany amin'ny fitsarana. Ny raharaha "Granger" dia tonga tany amin'ny Fitsarana Tampon'i Etazonia tamin'ny 1877. Ny fanapahan-kevitry ny fitsarana tamin'ireny tranga ireny dia nametraka soso-kevitra ara-dalàna izay hanova mandrakizay ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao any Etazonia.
Tamin'ny taona 1877, i Munn sy Scott, orinasan-tseraseran'ny orinasan-tserasera antsoina hoe Chicago, dia hita fa meloka tamin'ny fandikana ny lalàna Illinois Granger. Munn sy Scott dia nanantona ny faharesen-dahatra nanambara fa ny lalàna Granger an'ny fanjakana dia fanonganana tsy araka ny lalàm-panorenana ny taniny raha tsy misy fepetra voalazan'ny lalàna amin'ny fanitsakitsahana ny Fanitsiana faha-14 .
Taorian'ny nametrahan'ny Fitsarana Tampony Illinois ny lalàna Granger, dia nakarina tany amin'ny Fitsarana Tampon'i Etazonia ny raharaha an'i Munn v. Illinois .
Tao amin'ny fanapahan-kevitra 7-2 nosoratan'ny Chief Justice Morrison Remick Waite, ny Fitsarana Tampony dia nanambara fa ny orinasa manompo ny tombontsoan'ny besinimaro, toy ireo izay mitahiry na mitondra ny sakafo ara-tsakafo dia azo fehezin'ny governemanta. Araka ny heviny, Justice Waite dia nanoratra fa ny fitsipiky ny governemanta momba ny orinasa tsy miankina dia marina sy mahitsy "rehefa ilaina izany fitsipika izany ho an'ny tombontsoam-bahoaka." Tamin'ny alalan'io didim-pitsarana io, ny zava-nitranga tao Munn v. Illinois dia nametraka hevi-dehibe ny dingana federaly.
Wabash v. Illinois sy ny Lalàna momba ny varotra iraisam-pirenena
Efa ho folo taona taorian'ny nandraisan'i Munn v. Illinois ny Fitsarana Faratampony dia nametra mafy ny zon'ireo fanjakana mba hifehezana ny varotra iraisam-pirenena tamin'ny alàlan'ny didim-pitsarany tamin'ny raharaha 1886 an'ny Wabash, St. Louis & Pacific Railway Company v. Illinois .
Ao amin'ilay antsoina hoe "raharaha Wabash", ny Fitsarana Tampony dia nahita ny lalàn'i Granger ao Illinois, satria nampiharina tamin'ny lalamby izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana satria nikasa ny hifehy ny varotra iraisam-pirenena, fahefana natokana ho an'ny governemanta federaly amin'ny alàlan'ny fanitsiana am-polony .
Ho setrin'ny raharaha Wabash, navoakan'ny Kongresy ny Lalàna momba ny varotra iraisam-pirenena amin'ny taona 1887. Teo ambanin'io hetsika io, ny lalamby dia lasa sehatry ny Amerikanina voalohany tamin'ireo fepetra federaly ary nitaky ny governemanta federaly ny taham-pahaizany. Ankoatra izany, ny fandraràna ny lalamby dia tsy hiantsoroka ny taham-pifandraisana hafa mifototra amin'ny halavirana.
Mba hampiharana ireo fepetra vaovao dia namorona ihany koa ny komity iraisam-pirenena momba ny varotra ankehitriny, ny sampan-draharaham-panjakana tsy miankina voalohany.
Lisitry ny mpanefy vilany any Wisconsin
Nandritra ny lalàna rehetra tao amin'ny Granger, dia ny "Lalànan'ny Potter" no nahatonga an'i Wisco ho faran'izay be indrindra. Raha ny lalànan'ny Granger ao Illinois, Iowa, ary Minnesota dia nanendry ny fanaraha-maso ny lozam-pifamoivoizana an-dalamby sy ny taham-pitrandrahana harena ho an'ny komity misahana ny fitantanana mahaleotena, ny Lalàna Potter Wisconsin dia nanome fahefana ny solombavam-panjakana hametraka ireo vidiny ireo. Ny lalàna dia nitarika rafitra fanamafisam-panjakana izay manome alalana raha toa ka misy tombony ho an'ny lalamby. Tsy nahitana tombony tamin'ny fanaovana izany, ny lalamby dia nanakana ny lalana vaovao na nanitatra ny lalana efa misy. Ny tsy fahampian'ny fitaterana an-dalamby dia nahatonga ny toe-karenan'i Wisconsin ho ketraka noho ny fanerena ny mpanao lalàna ao amin'ny fanjakana hanafoana ny Lalàn'ny Potter amin'ny 1867.
Amin'izao fotoana izao, ny National Grange dia mbola mitoetra ho hery goavana eo amin'ny sehatry ny fambolena Amerikana ary singa manan-danja eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Ankehitriny, tahaka ny tamin'ny taona 1867, ny Grange dia miaro ny antony mahatonga ny tantsaha any an-toerana, anisan'izany ny varotra maimaim-poana sy ny politikan'ny toeram - pambolena ao an-toerana . '
Araka ny fanambaran'ny misiona, ny Grange dia miara-miasa amin'ny fiarahamiasa, ny fanompoana ary ny lalàna mba hanomezana ny tsirairay sy ny fianakaviana fahafahana hampivelatra ny tanjona avo indrindra mba hananganana vondrom-piarahamonina matanjaka sy fanjakana, ary firenena matanjaka kokoa.
Ny foibeny ao Washington, DC, ny orinasa Grange dia fikambanana tsy manohana ny fitondrana izay manohana politika sy lalàna fotsiny, na antoko politika na kandidà manokana.
Raha nanorina tany am-piandohana ny tantsaha sy ny tombontsoany momba ny fambolena, ny Grange maoderina dia miady hevitra amin'ny karazan-java-manahirana maro, ary misokatra ho an'ny olon-drehetra ny maha-mpikambana azy. Hoy ny gazety Grange: "Tonga avy any amin'ny tanàna rehetra ny mpikambana, tanàna lehibe, trano fonenana, ary trano fisakafoanana.
Miaraka amin'ireo fikambanana miisa maherin'ny 2.100 ao amin'ny fanjakana 36, ​​ny toeram-piompiana Grange ao an-toerana dia manohy ho ivon-toeran'ny fiainana ambanivohitra ho an'ny vondrom-piarahamonina maro.
Ny Dance American Ghost Ghost
Ny Fifanarahana Annapolis tamin'ny 1786
Ny fanokanana voalohany an'i George Washington
Mariho ny bokin'ny Devoly
Ny Pact Kellogg-Briand: ady tsy ara-dalàna
Iza avy ny Amerikanina?
Top 10 Topi-maso Ireo Heloka Bevava Nandritra ny 21 Taonjato
Tantara mikasika ny Espionage Rosiana
Maro tamin'ireo Amerikana no nanohitra ny Ady tamin'ny 1812
Baseball Kintana tamin'ny taonjato faha-19
Cómo pueden los vivas de ciudadanos sacar la tarjeta de residencia
Ny USCIS dia ny fanamarinana ny fanamarinana
Inona no atao hoe Hinglish?
Ny niavian'ny fitaovana Shofar amin'ny Jodaisma
Fomba hahafantarana ireo manamboninahitra romanina: famaritana
13 Fihetseham-panoherana mahatsikaiky mba hiatrehana ny ady amin'ny Thanksgiving Table
11 Teny manahirana manomboka amin'ny 'A'
Fankalazana ny Oniversite Selma
Mora ny mianatra ny fitarihana famindrana serivisy
Lalao tsara indrindra ho an'ny Monopole ho an'ny Geeks
Ny lahatenin'i Abraham Lincoln ao Gettysburg
Fifandraisana amin'ny fitiavana sy ny Skorpio
Inona avy ny saha Elysianina amin'ny angano grika?
Mahita ny tontolon'ny mpanjifa sy ny tontolon'ny mpamokatra
Ireo mozika 10 mora indrindra ao Amerika
30 Teny nalaina momba ny fahazoana fantatry ny tenanao
Inona no ohatra sasany amin'ny atoma?
Sarintany manan-danja amin'ny fandresena ny Empira Azteka
Adihevitra ara-moraly sy ara-tsosialy ho an'ny fanambadiana gay
Famaritana ny Labile Complex
Ny fampiasana fahatakarana fahatokisana amin'ny statistika tsy mitanila
Ny fomba vaovao nofidian'ny mpikambana vaovao ho ao amin'ny Hall of Fame Golf